नेपालको दबाबपछि भारत हट्यो पछाडि, दशगजाबाट सार्‍यो आफ्नो सुरक्षा पोस्ट – Sanchar Patrika
नेपालको दबाबपछि भारत हट्यो पछाडि, दशगजाबाट सार्‍यो आफ्नो सुरक्षा पोस्ट
May 20, 2020 337
काठमाण्डौं, ७ जेठ । पर्सास्थित ठोरीका बासिन्दाको विरोध र अडानपछि भारतीय पक्षले दशगजा क्षेत्रमा बनाउन लागेको सुरक्षा पोस्ट सीमाबाट करिब ३० मिटर पर सारेको छ ।
आजको कान्तिपुरमा शंकर आचार्यले लेखेको समाचार अनुसार भारतीय पक्षले वन गस्तीका लागि भन्दै सोमबारदेखि ठोरी गाउँपालिका–४ विजयबस्तीस्थित दशगजामै टावरसहितको सुरक्षा पोस्ट बनाउन थालेको थियो । अचानक गिट्टी, बालुवा झारेर निर्माण कार्यसमेत थालेको भारतीय पक्षलाई स्थानीयले रोकेका थिए ।
मंगलबार फेरि दशगजामै सुरक्षा पोस्ट बनाउन भारतीय सुरक्षा फौज एसएसबी, बिहार प्रहरी र भारतीय वन विभागका अधिकारी आएका थिए । करिब २ सय ५० को संख्यामा भेला भएका स्थानीय, नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरीसमेतको संयुक्त विरोध र अडानपछि भारतीय पक्ष आफ्नै भूमिमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न सहमत भएको हो । ठोरी–४ का वडाध्यक्ष बहीबहादुर पाख्रिनले ठोरीवासी र जनप्रतिनिधिको अडानले भारतीय पक्ष पछि हटेको बताए । ‘कुनै पनि हालतमा दशगजामा सुरक्षा पोस्ट बनाउन दिन्नौं भनेर हामीले अडान लियौं,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्ष अन्तत पछि हट्न तयार भयो’ ।
सशस्त्र प्रहरी बल सुवर्णपुर बीओपीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सिंहवीर मल्लले भारतीय पक्षले भ्यु टावरसहितको सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न खोज्दा विवाद भएको बताए । यसअघि ठोरी गाउँपालिका–४ स्याउलीबस्तीमा पनि यसरी नै दशगजामै वन विभागको पोस्ट बनाउन खोज्दा स्थानीयले विरोध गरेपछि भारतीय पक्ष पछि हटेर आफ्नै भूमिमा बनाइरहेको छ । करिब ५ वर्षअघि भारतीय पक्षले ठोरी–३ स्याउलीबस्तीको दशगजा क्षेत्रमै जबर्जस्ती भ्यु टावर बनाएको छ । पटकपटक भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न खोज्दा यहाँका स्थानीयले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।
Prevकोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन बनाउन दैनिक २२ घण्टा खटिने वैज्ञानिक डा.केट
Nextफेरी थप काठमाण्डौका यी ठाउँमा भेटिए नयाँ क्रोना संक्रमित, काम नपरी घर बाहिर ननिस्कन आह्वान !
तलब खान मुस्किल परेपछि सरकारले नियमावली परिवर्तन गरेर कित्ताकाट, कस्ता जग्गा कित्ताकाट ?
हेर्नुहोस फेरी अर्को काण्ड। निश्चललाई राजेश हमालको अभिनय मापन गर्ने अधिकार छैन